Unoda here kuchenesa mota yako usati waiendesa? - Yangu Mota Kunze
Unoda here kuchenesa mota yako usati waiendesa?
Nehunyanzvi mota dzese dzinotumirwa mumudziyo dzinofanirwa kucheneswa zvisati zvabuda munyika yekwavanobva.
Izvi zvinodaro nekuti vanogona kunge vaine zvakasvibisa zvine njodzi kuUnited Kingdom 'ecosystem.
Muchidimbu, mota yako haifanire kunge iine chinhu mukati isingafanirwe kunge iripo. Izvi zvinosanganisira zvipembenene nemamwe marudzi ezvipembenene.
Iri zano rakanaka kuti rive rakacheneswa zvakakwana usati waendesa iro pachiteshi.